खेलकुद पाँच वर्ष अघिको तस्बिर शेयर गर्दै के भने सन्दीपले ?
Nepal Online Patrika: युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अहिले फुर्सदिला छन् । विश्वभर कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएसँगै करिब ६ महिनायता उनले कुनै क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न पाएका छैनन् ।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को ३७ औं खेलमा चेन्नई सुपर किंग्सले राजस्थान रोयल्सविरुद्ध पहिला ब्याटिङ गर्ने भएको छ ।
कविता - October 14, 2020 0
विश्व चर्चित खेलाडी तथा पोर्चुगल राष्‍ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
आइपिएलमा सुनिल नारनको बलिङ एक्सन शंकास्पद !
कविता - October 11, 2020 0
वेस्टइण्डिजका अलराउन्डर सुनिल नारनको बलिङ एक्सन शंकास्पद पाइएको छ ।
टर्कीले जर्मनीलाई बराबरीमा रोक्यो
कविता - October 8, 2020 0
केनन कारामनले इन्जुरीमा समयमा गोल गरेपछि टर्कीले जर्मनीलाई बराबरीमा रोकेको छ। टर्कीले जर्मनीसँग ३-३ को बराबरी खेलेको हो।